Izinto ukwazi malunga ne-GPS Tracking System | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Kukho ezinye izibonelelo zenkqubo yokulandela umkhondo we-GPS abanini bamashishini abanokuyithumela ukuba balandele umkhondo wenqanawa ejonga indlela abasebenzi abaziphethe ngayo. Abanye abahambi babeke izixhobo zeGPS kwimithwalo ukuyikhusela ekubeni ibiwe okanye ilahleke. Uhlobo olunjalo lwenkqubo lukwabalulekile kwiintsapho. Intsapho inokusebenzisa izixhobo ze-GPS ukugcina iliso kubantwana, abantu abadala, okanye izilwanyana zasekhaya.
5391 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-19 Namhlanje